VLC media player waa software il furan oo hogaanka media player suuqii xorta ah muddo 12 sano ah. Waxaa la aasaasay sannadkii 2001 by magaca VideoLan. Waa urur aan faa'iido doon oo aaminsan in adeega. Ciyaaryahanka VLC waxaa laga heli karaa nidaam kasta oo ka hawlgala iyo qalab ay noqon Windows, Android ama iPhone , iPad , Laptop. VLC media player waa ugu doorbiday ciyaaryahanka si ay miday mahad. Waxaa ku dhowaad audio kasta oo yaqaan iyo qaab video, viz. Ciyaari karo MPEG , MKV, 3GP, DIVX, AVI iyo qaabab kale oo badan oo la mid ah. Ciyaaryahan warbaahinta ayaa waxaa loogu tala galay la ah si kaamil ah.
VLC uu dhawaan soo bandhigay sida ay version dambeeyay 2.2.1 kaas oo fiican. Waxa uu leeyahay user saaxiibtinimo interface oo lagu heli karaa luqado kala duwan aad. Waxay leedahay tiro balaadhan oo ah fursadaha in ay suuq oo loo isticmaali karaa si kor loogu qaado tayada warbaahinta. Waxay leedahay pool balaadhan oo ah fursadaha iyo qalab loogu talagalay dadka isticmaala sida xasilinta audio, Isgoysmo, AtmoLight saamaynta video, barbaraha graphic iyo fursado badan oo kale taas oo ka dhigaysa arkaysid iyo dhagaysiga ka sii enchanting. Ciyaaryahan warbaahinta ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay feature .Wadashaqayntaas oo dadka isticmaala si ay u helaan awood u files warbaahinta kaydiyaa qalabka kala duwan.
Ciyaaryahanka warbaahinta VLC lagala soo bixi karaa iyada oo http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html taas oo ay si rasmi ah. Waxa kale oo lagala soo bixi karaa iyada oo websites kale, viz.
Ciyaaryahanka warbaahinta VLC lagala soo bixi karaa iyo lagu xiraa talaabooyinka soo socda
Guji link-ka rasmiga ah ama mid ka mid ah 5 links kor ku xusan in ay kala soo bixi file Mudanayaasha.
Click on Double icon Mudanayaasha ay u bilaabaan habka rakibo.
Riix 'Haa' in la siiyo ogolaansho iyo in ay u gudbaan tallaabada xigta.
Dooro luqadda rakibayo sida Ingiriisi. Riix OK.
Sanduuqa kale oo wada hadal la furi doonaa. Si ka hor dhaqaaqo la rakibo, riix Next
Heshiiska License sanduuqa wada hadal la furi doonaa. Mar labaad riix Next.
Qaybaha doorashada oo aad rabto in aad kala soo bixi guji Next in ay ka hor dhaqaaqo.
Soo qaado meel meesha aad rabto files Mudanayaasha sida drive (C / D / E) iyo guji dajiyo.
Sug ilaa rakibo dhameystiray, ka dibna riix on Finish in uu ordo VLC media player.
Hadda jiidi oo hoos u files warbaahinta ee suuqa kala ah VLC Media Player. Play file warbaahinta kasta. Waxa kale oo aad ka heli kartaa maktabadda warbaahinta aad via VLC.
Screenshot Qaar ka mid ah ciyaaryahan VLC ee Windows 8
VLC waa ciyaaryahan cajiib ah oo u fudud in ay isticmaalaan oo ka ciyaari kara ku dhowaad qaab kasta warbaahinta. Waxaa ku raran yihiin qaababka fiican kaas oo ku siin waaya-aragnimo xiiso iyo xusuus in dadka isticmaala ay. Guud ahaan waa ciyaaryahan weyn oo uu helay jawaab stupendous ee 12 sano ee lasoo dhaafay. Tayada ciyaaryahanka ayaa lagu soo hagaagtay by qamaar cayayaanka iyo shilalka. Waxa ay la timaado feature cusub oo waqti jediyay. Cabbirka file rakibidda VLC 2.2.1 file exe 64 xoogaa waa 28,45 oo kaliya MB. Ciyaaryahan warbaahinta waxaa lagu heli karaa luqado kala duwan sida Spain, Sweden, Thailand, Holland iyo qaar badan.
S: Marka aan updated in Windows 8.1 oo lagu rakibay VLC 2.2.0, waxaa burburtay. Maxaan sameeyaa?
A: Guuleysatey nidaamka iyo dib rakibi ciyaaryahan warbaahinta. haddii dhibaatada ay weli sii socoto, u tag http://nightlies.videolan.org/build/win32/last/
Q: VLC 2.2.0 burburtay oo u ciyaara kaliya file maqal ah oo ku saabsan rakibidda dib. Qof ku caawin karaa?
A: Ku rakib 8.1 mar kale iyo tirto faylasha qaabeynta. Haddii dhibaatadu sii socoto, la xiriir forum taageerada.
S: Mar kasta oo aan ka ciyaari video ah, shilalka ciyaaryahanka. Maxaan sameeyaa?
A: Waxaad ka furan kartaa regedit iyo tirtirto this sub-muhiimka ah NMgamingms.sys iyo haddii dhibaato weli xiriir forum taageerada.
> Resource > VLC > Isticmaal VLC for Windows 8 habsami leh!